Water Treatment simika
famonoana afo Powder
Ny kalsioma karbônaly mpikatroka HEDP•Na4 granular
High Efficiency Antiseptika White Granular Food Grade ...
Savony fofona Ethyl Phenyl Acetate CAS No: 101-97-3
mandoko indostrialy Sodium alginate matevina
guanidine famonoana olona polyhexamethylene biguanide 2 ...
Lithium Type Molecular Sive usd ho an'ny oxygenerator
Mpanelanelana amin'ny fanafody 3'-Nitroacetophen ...
Fivarotana fanafody afovoan-tsolika Diethyl oxalate CAS No: ...
Histamine fanafody afovoany Histamine Dihydrochlorid ...
Analam-parasy Glutaric Anhidrida CAS N ...
Sakafo Additive Sakafo Sakafo 98% - Inos ...
Octadecyl Amine 98% Textile ny Vondrona Fanampiny kilasy
Akoho tsirony Bouillon Cubes
60 harato Monosodium Glutamate
Anti-sombin-javatra mety levona extinguishing mpandraharaha 6% S / AR
Fitaterana: Ranomasina, Tany
Fahaiza-mamatsy: 500 MT / Volana
Fonosana: 200kg / durm
Vokatra: 500 MT / Volana
Supply Fahaizana: 500 MT / Volana
6% karazana anti-mety levona sombin-javatra afo Extinguishing Agent dia tena mandaitra ny tontolo iainana sariaka afo extinguishing mpandraharaha. Ny toetra dia ny namorona sombin-javatra dia afaka mamorona miaro sarimihetsika eny ambonin'ny rano ny tendrony solika, sy ny horonan-tsary dia afaka miaro ny ambony sombin-javatra tsy ho simba, ary dia toy izany no anjara ny afo extinguishing. Tsy afaka ny tsy hamono ny afo solika rano mamanala, fa koa ny menaka solika hamono afo. Ny vokatra hamono ny afo extinguishing haavon'ny ⅢC ny nonpolar solvent afo sy ARⅠB afo extinguishing solvent afo. Noho izany dia manana toetra maro-Functional.
Executive Standard Number: GB15308-2006 " sombin-javatra afo extinguishing mpandraharaha "
Light mavo Mametaka
Arakaraka (20 ℃ ), g / cm3
Anti-matin'ny hatsiaka, mitsonika fampisehoana
Tsy misy hita maso sy ny heterogeneity stratification
Flow dia lehibe noho ny fitsipika momba vahaolana
Ny fahadisoan-dàlana avy amin'ny eigenvalue tsy lehibe noho 1.0 na tsy lehibe noho ny eigenvalue 20%
25% drainage ny .min
Fahadisoan-dàlana avy amin'ny toetra sarobidy dia tsy mihoatra ny 20%
E xtinguishing fotoana (acétone), min
Anti-mirehitra fotoana (acétone), min
Extinguishing fotoana (120 # solvent menaka), min
Strong nandatsaka ≤ 3, tsy mora ario ≤ 5
Anti-mirehitra fotoana (120 # solvent menaka), min
Slow famotsorana ≥ 10
Matin'ny hatsiaka Point, ℃
Ao anatin'ny eigenvalue - 4 º
Operating mari-pana, ℃
Matin'ny hatsiaka teboka +5 ~ 40
Ny afo extinguishing mpandraharaha dia azo ampiasaina amin'ny isan-karazany ambany-ahazoana afo extinguishing rafitra sy ny rano madio amin'ny alalan'ny fampifangaroana sombin-javatra 6:94 tahan'ny afo. Nampiasaina be teo amin'ny zavamaniry simika lehibe, simika fibre zavamaniry, solika orinasa, vokatra simika trano fanatobiana entana ny afo sy ny faritra hafa ny fiarovana. Ity vokatra dia miovaova, tsy misy poizina, tsy manimba tsikelikely, toy ny famafazana ho eo an-maso, na hoditra, sasao amin'ny rano.
Io afo-extinguishing mpandraharaha tahiry vahaolana dia tokony ho voatahiry amin'ny Ambient mari-pana ambanin'ny 45 ° C ary indrindra ny fanompoana ambany indrindra mari-pana. Ny vokatra dia voaisy tombo-kase, ary voatahiry ao amin'ny etsy ambony tontolo iainana mandritra ny roa taona.
Mitady sombin-javatra tonga lafatra Extinguishing Agent Manufacturer & mpamatsy? Manana fantina malalaka amin'ny vidiny lehibe mba hanampiana anao hahazo famoronana. Ny sombin-javatra mety levona Anti-Extinguishing Agent dia azo antoka tsara. Origin China izahay Factory ny Types ny sombin-javatra Extinguishing Agents. Raha toa ka manana fanontaniana, Aza misalasala mifandray aminay.
Product Categories: famonoana afo Powder
Previous: High-fahadiovana kalsioma klôro granular / vovoka
Next: ammonium aluminium sulfate
ABC vovoka maina afo extinguishing mpandraharaha (75)
Tontolo iainana ABC vovoka maina afo extinguishing ...
-Kalitao avo ABC vovoka afo extinguishing mpandraharaha
ABC vovoka maina afo extinguishing mpandraharaha (50%)
Fluoride sombin-javatra extinguishing mpandraharaha 6%
Address: Tsia, 448 heping lalana andrefana, Shijiazhuang, Hebei
Fampiharana ny sodium thiosulfate amin'ny rano...
herinandro feno ny sodium thiosulfate
Ny ady eo amin'i Rosia sy Ukra...
Nahoana no ilaina ny manampy polydextrose amin'ny ...
fonosana monosodium glutamate 40 mesh